အားလုံးကို ကြိုဆိုလျက်ပါ၊ လာရောက်စာဖတ်ကြသူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ နေ့စဉ်ဆုတောင်းပေးလျက်ပါ။
ဆန်နီနေမင်းဆိုတာကတော့ ဦးဇင်းစာရေးတဲ့ ကလောင်နာမည်ကို ပေးထားတာပါ။ ဦးဇင်းအသက်(၃၃)နှစ် ရှိပါပြီ။ 2008-ခုနှစ်မှာ မန္တလေးမြို့၊ သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှ B.A ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး 2010-မှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့၊ ကေလနိယတက္ကသိုလ်၌ M.A ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။ 2011-မှာ M.A အောင်မြင်လို့ ယခု 2012- မှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကေလနိယတက္ကသိုလ်တွင် Master of Philosophy(M.philဘွဲ့ ဆက်လက်သင်ယူနေပါတယ်။ (05.12.2012) ရက်နေ့မှာ Doctor of Philosophy (Ph.D) ကျမ်းပြုဖြစ်သွားပြီမို့ ကျမ်းပြုနေပါတယ်။ ဦးဇင်းကို ကိုယ့်ညီအကိုမောင်နှမသားချင်းကဲ့သို့ အားလုံးခင်မင်နိုင်ပြီး သိချင်တာရှိရင်လည်း ကိုယ့်မောင်နှမသားချင်းဆွေမျိုးကဲ့သို့ သဘောထားပြီး ခင်မင်စွာနဲ့ မေးမြန်းကြပါ။ ဦးဇင်း လေ့လာထားသမျှ၊ တတ်သိသမျှပညာများသည် အများအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်း တတ်သိသမျှကို ပြောပြပေးပါမယ်။ သို့သော် ဦးဇင်းသည် ပိဋကတ်ကျမ်းတတ်ဆရာတော် မဟုတ်သောကြောင့် အမှားများပါလျှင် သည်းခံခွင့်လွတ်ပေးကြပါလေ။
ယခုတော့ အောက်ပါလိပ်စာမှာ ကျောင်းထိုင်နေရပါတယ်။
Phone- 09-789556638. 09-420064265.
answer and question (139)
other Website (158)
စာရေးသူ၏ facebook စာမျက်နှာ
၀က်ဆိုဒ်များဖွင့်ဖတ်ရာတွင် မကျွမ်းကျင်သေးသောသူများ သိရှိရန် ၁။ ဆောင်းပါးပို့စ်တစ်ခုရဲ့ အပြည့်စုံကိုဖတ်ချင်ရင် အဲဒီပို့စ်အောက်က Read more ကို နှိပ်ပါ။ ၂။ တင်ထားသောဆောင်းပါးပို့စ်များ စာလုံးသေး၍ စာလုံးကြီးဖြင့် ဖတ်ချင်ပါက Ctrl နှင့် + တွဲနှိပ်လိုက်ပါ။ ၃။ စာရေးသူတင်ထားသော ဆောင်းပါးပို့စ်များ တစ်မျက်နှာ ဖတ်ပြီးပါက နောက်တစ်မျက်နှာသို့သွားချင်လျှင် ဆိုဒ်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Older post ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ၄။ comment ရေးချင်လျှင် ဆောင်းပါးပို့စ်ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ comment ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လျှင် comment ရေးစရာဘောက်လေး တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာရေးပြီးလျှင် PUBLISH YOUR COMMENT ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ၅။ ဦးဇင်းရေးသားထားသော စာများကို မည်သူမဆို စိတ်တိုင်းကျ ကူးယူခွင့်ပြုပါသည်။ သို့သော် စာရေးသူ၏ နာမည်နှင့်လိပ်စာကိုတော့ ဖော်ပြသည့်နေရာများတွင် ဆောင်းပါး အောက်၌ ထည့်ပေးစေချင်ပါသည်။
ဟံဂံ သူလေး တောကျောင်းက ဆရာမမှတ်စု
Free BitDefender AntiVirus 2009 Key for 1 year
VOA လေဒီယို မြန်မာသတင်း
ဘုရားဥပဒေများကို ခေတ်ကာလအရ ပြောင်းလဲလို့ရပါသလား
အွန်လိုင်းမှာ ချစ်သူဖြစ်ကြတာ ကာမေသုထိုက်ပါသလား
If you want to Myanmar Font
(1) http://www.mediafire.com/?sxbqx8g8h5i7cmj (If you want to write Myanmar font on the Desktop you can download this Software.) (2) http://www.mediafire.com/?zbo8l8slcpu8xkc (If you want to read and write Myanmar font in your computer you can download this Software.) (3) http://www.mediafire.com/?9oiddikg8cl1ob5 (If you don't ok above (2) software you can download this software.) ကွန်ပျုတာမှာ မြန်မာလိုထည့်ချင်ပါက အပေါ်က လင့်တွေဖွင့်ပြီး ဒေါင်းလော့ဆွဲပါ။ ပြီးရင် ကွန်ပျုတာမှာ install မောင်းလိုက်ပါ။ မြန်မာစာများ အလွယ်တကူ ရေးဖတ်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။
အမေး။ ။ အရှင်ဘုရား ဘာသာခြားများအား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်စေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပြတဲ့ ကာလာမသုတ်ကိုဟောဖြစ်ပုံ သမိုင်းကြောင်းသိချင်ပါတယ်။ ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် သုံးဘာသာနဲ့ အပြည့်အစုံသိချင်ပါတယ်ဘုရား။
အဖြေ။ ။ အမေးတာက နဲနဲလေးပေမဲ့ ဖြေရမှာက သုံးဘာသာတောင်ဆိုတော့ များတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အများအကျိုးအတွက်ငဲ့ပြီး ဖြေပါ့မယ်။
ကေသမုတ္တိနိဂုံးသားများဖြစ်ကြတဲ့ ကာလာမမင်းများဟာ ဘုရားရှင်ထံ ချည်းကပ်ကြတယ်။ အချို့က တစ်နေရာမှာ ထိုင်နေကြတယ်။ အချို့က ဘုရားရှင်နဲ့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပြောဆိုနေကြတယ်။ အချို့က အမှတ်ရဖွယ်ပြောဆိုရင်း တစ်နေရာမှာ ထိုင်နေကြတယ်။ အချို့က ဘုရားရှင်ကို လက်အုပ်ချီပြီး တစ်နေရာမှာ ထိုင်နေကြတယ်။ အချို့က အမည်၊ အနွယ်တွေကိုပြောပြီး ထိုင်နေကြတယ်။ အချို့က ဘာမှမပြောဘဲ တိတ်ဆိပ်စွာထိုင်နေကြတယ်။
ကေသမုတ္တိနိဂုံးသားများဖြစ်ကြတဲ့ ကာလာမမင်းများဟာ ဘုရားရှင်အား အောက်ပါအတိုင်း လျှောက်ထားကြတယ်။ “အရှင်ဘုရား အချို့ရဟန်းပုဏ္ဏားများဟာ ကေသမုတ္တိနိဂုံးကို ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘာသာအယူဝါဒသာ မှန်တယ်လို့ ပြောဆိုပြီး သူတစ်ပါးအယူ ၀ါဒကိုကျတော့ မရိုမသေ ထိပါးပုတ်ခတ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ အခြားအခြားရဟန်း ပုဏ္ဏားတွေလဲ ကေသမုတ္တိနိဂုံးကိုရောက်လာကြတယ်။ သူတို့လဲပဲ ကိုယ့်အယူဝါဒကိုသာ မှန်တယ်လို့ပြောဆိုကြပြီး သူတစ်ပါး အယူဝါဒကိုကျတော့ မရိုမသေ ထိပါးပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အရှင်ဘုရား ဘယ်ရဟန်းပုဏ္ဏားရဲ့ဝါဒကမှန်ပြီး ဘယ်ရဟန်းပုဏ္ဏားရဲ့ဝါဒက မှားပါသလဲဘုရား၊ တပည့်တော် ယုံမှားသံသယ ဖြစ်မိပါတယ်ဘုရား”လို့ လျှောက်တဲ့အခါ ဘုရားရှင်က “ကာလာမတို့ သင်တို့ဟာ ယုံမှားသင့်တဲ့အတွက် ယုံမှားတာပဲ၊ သံသယဖြစ်သင့်တဲ့အတွက် သံသယဖြစ်ကြတာပဲ”လို့ မိန့်တော်မူကာ ကာလာမသုတ်ကို ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။
အထေ ခေါ ကေသမုတ္တိယာ ကာလာမာ ယေန ဘဂ၀ါ တေနုပသင်္ကမိံသု၊ ဥပသင်္ကမိတွာ အပ္ပေကစ္စေ ဘဂ၀န္တံ အဘိဝါဒေတွာ ဧကမန္တံ နိသီဒိံသု၊ အပ္ပေကစ္စေ ဘဂ၀တာ သဒ္ဓိံ သမ္မောဒိံသု၊ သမ္မောဒနီယံ ကထံ သာရဏီယံ ၀ီတိသာရေတွာ ဧကမန္တံ နိသီဒိံသု၊ အပ္ပေကစ္စေ ယေန ဘဂ၀ါ တေနအဉ္ဇလိံ ပဏာမေတွာ ဧကမန္တံ နိသီဒိံသု၊ အပေကစ္စေ နာမဂေါတ္ထံ သာဝေတွာ ဧကမန္တံ နိသီဒိံသု၊ အပ္ပေကစ္စေ တုဏှီဘူတာ ဧကမန္တံ နိသီဒိံသု၊ ဧကမန္တံ နိသိန္နော ခေါ တေ ကေသမုတ္တိယာ ကာလာမာ ဘဂ၀န္တံ ဧတဒဝေါစုံ-
သန္တိ ဘန္တေ ဧကေ သမဏဗြဟ္မဏာ ကေသမုတ္တံ အာဂစ္ဆန္တိ၊ တေ သကံယေ၀ ၀ါဒံ ဒီပေန္တိ ဇောတေန္တိ၊ ပရပ္ပ၀ါဒံ ပန ခုံသေန္တိ ၀မ္ဘေန္တိ ပရိဘ၀န္တိ၊ သြမက္ခိံ ကရောန္တိ၊ အပရေပိ ဘန္တေ ဧကေ သမဏဗြဟ္မဏာ ကေသမုတ္တံ အာဂစ္ဆန္တိ၊ တေ သကံယေ၀ ၀ါဒံ ဒီပေန္တိ ဇောတေန္တိ၊ ပရပ္ပ၀ါဒံ ပန ခုံသေန္တိ ၀မ္ဘေန္တိ ပရိဘ၀န္တိ၊ သြမက္ခိံ ကရောန္တိ၊ တေသံ နော ဘန္တေ အမှာကံ ဟောတေ၀ ကင်္ခါ၊ ဟောတိ ၀ိစိကိစ္ဆာ “ကော သု နာမ ဣမေသံ ဘ၀တံ သမဏဗြဟ္မဏာနံ သစ္စံ အာဟ၊ ကော မုသာ” တိ။ အလံ ဟိ ဝေါ ကာလာမာ ကင်္ခိတုံ အလံ ၀ိစိကိစ္ဆိတုံ၊ ကင်္ခနီယေ၀ ပန ဝေါ ဌာနေ ၀ိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပန္နာ။ (အင်္ဂုတ္ထရနိကာယ်၊ တိကနိပါတ၊ ကေသမုတ္တိသုတ်၊နှာ-၁၈၉)
The history of the Kalarma Thote .KayThaMoutTiNiGone kings has approached to the Lord Buddha .Some were havingaconversation with Lord Buddha ,while others engaged themselves in their own topics, or were just stayed silently .
The conversations that they have had with Lord Buddha was as below,“Lord , some of the monks came to KayThaMoutTiNiGone and stated that their beliefs, teachings and ideologies of their own religion were the universal truth and been giving offensive critiques over those of other religions with impolite manners.”
“There were monks who also come from different places to us and they have conducted the same manner towards the other religion.”
“Lord, whose beliefs are the truth and whose are wrong. We are becoming so sceptical on these matters”
Lord Buddha replied “Dear my kings, you all are being sceptical because you should be, you are being doubtful because you should be” and has delivered the Kalama Thote.
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 12:52 PM
Labels: other Website
©2009 ဆန်နီနေမင်းFree Wordpress Themes and Free Blogger Templates by TNB Popularized by Watch Tv Shows Online. Unblock through myspace proxy unblock, Songs by Christian Song Chords